17 Archives - Tameelay
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံက အမျိုးသားတွေနဲ့ လုံးဝကိုခြားနားနေပြီး အမျိုးသမီးတွေမှာသာဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါတချို့ကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ အသက်အန္တရာယ်ကိုခြိမ်းခြောက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေဟာ တစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘဲ ရက်ရှည်လများအစပျိုးပြီး ဖြစ်လာတာပါ။ ရောဂါအစပြုနေချိန်မှာ သတိထားမိခဲ့ရင်အသက်အန္တရာယ်မဖြစ်အောင် အချိန်မီတားဆီးနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတိုင်းသတိပြုသင့်တဲ့ ရောဂါအစပျိုးလက္ခဏာတွေကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဗိုက်ပူနေခြင်း မိန်းကလေးတွေဟာ အသက်ရလာတာနဲ့အမျှ လေ့ကျင့်ခန်းတွေသေချာမလုပ်ဘူးဆိုရင် ဗိုက်ပူလာတတ်ပါတယ်။ ဗိုက်မှာအဆီစုပြီး ဗိုက်ပူတာက ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပေမယ့် အစားအများကြီးစားထားသလိုမျိုး ဗိုက်ဖောင်းပြီးပူနေတယ်ဆိုရင်တော့ စိုးရိမ်ရပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်က အမြဲလိုလိုတင်းပြီး ပူနေတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ရင်သားကင်ဆာ ဒါမှမဟုတ် သားအိမ်ကင်ဆာအစပျိုးနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ (၂) မေးစေ့နားတဝိုက်ဝက်ခြံတွေထွက်ခြင်း ဝက်ခြံထွက်တာကလည်း ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်တတ်တဲ့အရာမို့ သိပ်တော့မထူးဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မေးစေ့နားတဝိုက်မှာ ဝက်ခြံတွေအမြဲလိုိုလိုထွက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဟော်မုန်းတွေ အလွန်အမင်းကမောက်ကမဖြစ်နေပါပြီ။ သင့်မေးစေ့နားတဝိုက်မှာ ဝက်ခြံတွေအမြဲထွက်နေတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့သေချာပြသစစ်ဆေးဖို့လိုနေပါပြီ။ (၃) လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ ကိုယ်လက်တွေအလွန်အမင်းနာကျင်ခြင်း လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ … Read more
Categories General Knowledge Tags 17, pp
သွယ်လျတဲ့ခြေတံလေးတွေက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အလှအပကို ပိုလှအောင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပြီး စကတ်ပဲဝတ်ဝတ်၊ ဘောင်းဘီပဲဝတ်ဝတ် အမြဲကြည့်ကောင်းနေစေပါတယ်။ ခြေသလုံးတုတ်နေတဲ့အခါ ဘာဝတ်ဝတ်မလှဘူးလို့ထင်နေနိုင်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလျော့နည်းနိုင်ပါတယ်။ ခြေသလုံးတုတ်နေလို့ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမလျော့နည်းရအောင် ၊ သွယ်လျတဲ့ခြေတံလှလှလေးတွေရဖို့ အခုဖော်ပြမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ လုပ်လိုက်ပါ။ (၁) ခြေဖျားထောက်လမ်းလျှောက်ခြင်း ခြေဖျားထောက်ပြီး လမ်းလျှောက်တာက ခြေသလုံးကိုသွယ်လျစေပါတယ်။ ခြေဖျားထောက်လမ်းလျှောက်တာကို တစ်မိနစ်လောက်လုပ်ပြီး တစ်မိနစ်လောက်နားပါ။ အဲ့ဒါကို ငါးခေါက်လောက်လုပ်ပေးပါ။ (၂) အလေးတုံးကိုင်ပြီးခြေဖျားထောက်ခြင်း လက်နှစ်ဖက်က အလေးတုံး ဒါမှမဟုတ် အလေးချိန်ပါတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကို လက်ကကိုင်ပြီး နေရာမှာခြေစုံရပ်ကာ ခြေထောက်နှစ်ဖက်တပြိုင်တည်း ခြေဖျားထောက်ပေးပါ။ အဲ့ဒီအနေအထားမှာ စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်နေပြီး ခြေထောက်ကိုပြန်ချပါ။ အဲ့ဒါကို ၁၀ ကြိမ်လုပ်ပေးပါ။ (၃) လှေကားပေါ်ပြေးတက်ခြင်း လှေကားထစ် ၁၅ ထစ်လောက်ကို ဆက်တိုက်ပြေးတက်၊ပြေးဆင်းတာကို မိနစ်အနည်းငယ်လောက်လုပ်ပေးပါ။ ဒါကလည်း ခြေသလုံးတွေကို သွယ်လျစေပါတယ်။ (၄) အလေးတုံးကိုင်ပြီးလမ်းလျှောက်ခြင်း … Read more
လူအများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါ ကိုယ့်အတွက်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပေမယ့် သည်းခံရတာတွေရှိပါတယ်။ စိတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာမှုတွေအရ လူအများနဲ့ဆက်ဆံရာမှာ သည်းညည်းခံဖို့အရမ်းခက်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ ကြုံရတတ်တယ်လို့ သိခဲ့ကြပါတယ်။ လူအများစုကို စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အခြေအနေကတော့ ဒါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ငါဒီလိုဖြစ်ဖို့မရည်ရွယ်ပါဘူး ကိုယ့်ကိုထိခိုက်အောင်လုပ်ပြီးမှ ဒီလိုဖြစ်ဖို့မရည်ရွယ်ဘူး ဆိုတဲ့စကားကိုပြောရင် တော်တော်လေးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတစ်ယောက်က ဘယ်လိုလုပ်ရပ်ကိုလုပ်ရင် ဘယ်လိုအကျိုးဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိကြ၊နားလည်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ အမှားတစ်ခုခု၊ အပြစ်တစ်ခုခုကျူးလွန်ပြီး ဆိုးဆိုးရွားရွားတွေဖြစ်လာမှ ဒီလိုဖြစ်ဖို့ မရည်ရွယ်ပါဘူး ဆိုတဲ့စကားကိုပြောတာက တာဝန်မဲ့လွန်း၊ စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းလွန်းပါတယ်။ (၂) ငါဘယ်လိုခံစားရလဲမင်းမသိပါဘူး တစ်ယောက်ယောက်က ဝမ်းနည်းနေတဲ့အခါ ကိုယ်က သူစိတ်သက်သာရာရအောင်လို့ အားပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ငါဘယ်လိုခံစားရလဲမင်းမသိပါဘူး ဆိုတဲ့တုံ့ပြန်မှုမျိုးကို ရတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ်ဝမ်းနည်းအားငယ်နေချိန် ကိုယ့်အနားမှာ ရှိပေးတဲ့ဘယ်သူ့ကိုမဆို ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ ကိုယ့်ကိုအားပေးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူကို ဒီလိုတုံ့ပြန်လိုက်တာဟာ မဆိုင်တဲ့လူကိုမဲလိုက်တာပါပဲ။ (၃) ငါသာဆိုဒီလိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်မိသားစုဝင် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်က အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ … Read more
အခုနောက်ပိုင်းမှာ အိမ်ထဲမှာစိုက်တဲ့အပင်ငယ်လေးတွေစိုက်ကြတာကို လူတွေပိုစိတ်ဝင်စားလာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အပင်သေးသေးလေးတွေက အိမ်ထဲမှာနေရာလည်းမယူဘဲ ကိုယ့်အိမ်၊ကိုယ့်အခန်းလေးကို ပိုလှအောင်၊ နေချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် ကူညီပေးတဲ့အပြင် စိတ်ကိုလည်း လန်းဆန်းစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အခန်းထဲမှာ အပင်ငယ်လေးတွေစိုက်ချင်သူတွေအတွက် အပင်စိုက်ဖို့ စိတ်ကူးဆန်းဆန်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ငါးကန်အဟောင်း ဒါမှမဟုတ် ဖန်ခွက်အဟောင်းတွေထဲမှာ မြေကြီးအနည်းငယ်ထည့်ပြီး ဒီလိုအပင်လေးတွေထည့်စိုက်ပါ။ (၂) ဓာတ်ပုံဘောင်အဟောင်း ၊ မှန်ဘောင်အဟောင်းတွေထဲမှာ မြေကြီးထည့်၊ သန်ဇကာလေးအပေါ်ကအုပ်ပြီး အပင်လေးတွေ ထည့်စိုက်ပြီး အလှဆင်ပါ။ (၃) အလယ်မှာ အပေါက်ပါတဲ့အိုးလေးတွေမှာ အဝတ်စတွေကို လျှာလိုချပြီး ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ရေခွက်လေးထဲစိမ်ထားလိုက်ရင် အပင်ရေလောင်းဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ (၄) သစ်ခွအိုးလေးတွေကိုလည်း အဝဘက်မှာ သန်ဇကာလေးတပ်ပါ။ ပြီးရင် ဇောက်ထိုးချိတ်ထားပြီး ပုံမှာပြထားသလိုရေလောင်းပေးလိုက်ရင် အပွင့်တွေမြန်မြန်ပွင့်လွယ်ပါတယ်။ (၅) ချည်တစ်ချောင်းထိုးထိုးတတ်တဲ့သူတွေက ပုံမှာပြထားသလို အရုပ်လေးတွေထိုးပြီး ပန်းအိုးအဖြစ်အလှဆင်နိုင်ပါတယ်။ (၆) ခုရုခွံလေးတွေထဲမှာလည်း … Read more
ဒီနေ့ ရတေံခှနျတောငျဘကျ စာအုပျသှားပို့တော့ မွငျတှရေ့တာလေးပွောပွခငျြတယျ . . . ဟိုတလောက Facebook ပျေါမှာ ရတေံခှနျတောငျနားက လယျတောထဲမှာ တဲလေးတှနေဲ့ ကွကျကွျောဆိုငျလေး တဈယောကျက စဖှငျ့တယျ . . . ရှုခငျးလေးကလညျးစိမျးဆိုပွီး ဓာတျပုံရိုကျလို့ အရမျးလှတော့ လူတှသှေားကွရငျး နာမညျကွီးသှားတယျ . . . ဒီနေ့ အဲ့ဘကျလညျးရောကျရော မကျြလုံးပွူးသှားတယျ . . . အဲ့လို တဲလေးတှနေဲ့ ကွကျကွျောဆိုငျ ဆိုငျပေါငျး ၂၀ လောကျဖွဈသှားတယျ . . တဈလမျးတညျးမှာပဲနျော . . . တဈခြို့ဆို ဘေးခငျြးကပျလကျြ . . . အဲ့ဒါလေးမွငျတော့ ငယျငယျက ဖတျခဲ့ဖူးတဲ့ပုံပွငျလေး သှားသတိရတယျ . … Read more
Categories Tameelay Knowledge Tags 17, Nay Lin